गर्मीमा कुन तरकारी खानु स्वास्थ्यका लागि उपयुक्त ? – आफ्नो प्रेरक संसार
गर्मीमा कुन तरकारी खानु स्वास्थ्यका लागि उपयुक्त ?
Bibas chetan — १६ जेष्ठ २०७६, बिहीबार २०:४५0comment
गर्मी मौसममा खानपानमा अलिकता लापरवाहीले पनि बिरामी पर्ने सम्भावना हुन्छ । जाडो मौसमको तुलनामा गर्मीमा पाचन शक्ति कमजोर हुन्छ । यस्तो बेला बढी तारेको या मसालायुक्त खाना धेरै खानुहुँदैंन । फुड प्वाइजनको समस्या हुने पनि यही मौसममा हो ।
त्यसैले गर्मीमा यस्ता तरकारी खानु उपयोगी मानिन्छ :